အာဖဂန် နိုင်ငံတော်သီချင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
အာဖဂန် နိုင်ငံတော်သီချင်း(ပါရှန်း: سرود ملی‎‎ - Surūd-e Millī, ပါရှတို: ملی سرود‎‎ - Millī Surūd; lit. 'နိုင်ငံတော်သီချင်း')ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ် မေလတွင် တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပြီး အသုံးပြုခဲ့သည်။ အာဖဂန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အပိုဒ်ခွဲ ၂၀ အရ နိုင်ငံတော်သီချင်းသည် ပတ်ရှ်တိုဘာသာစကားဖြင့် ဖြစ်ပြီး "ဘုရားသခင်၏ ကြီးမြတ်မှု"နှင့် အာဖဂနစ္စတန်နိုင်ငံရှိ လူမျိုးစုများကို ရည်ညွှန်းထားရမည်ဖြစ်သည်။ စာသားကို အဒူလ် ဘာရီ ဂျဟာနီမှ ရေးသားခဲ့ပြီး ဂီတကို ဂျာမန်-အာဖဂန်တေးပြုစာဆို ဘာဘရက် ဝါဆာမှ ရေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဒူလ် ဘာရီ ဂျဟာနီ၊ ၂၀၀၆ (၂၀၀၆)
ဘာဘရက် ဝါဆာ၊ ၂၀၀၆ (၂၀၀၆)
မေ ၂၀၀၆ (၂၀၀၆-၀၅)
၁.၁ နိုင်ငံတော်သီချင်း (၁၉၂၆-၁၉၄၃)
၁.၂ နိုင်ငံတော်သီချင်း (၁၉၄၃-၁၉၇၃)
၁.၃ နိုင်ငံတော်သီချင်း (၁၉၇၃-၁၉၇၈)
၁.၄ နိုင်ငံတော်သီချင်း (၁၉၇၈-၁၉၉၂)
၁.၅ နိုင်ငံတော်သီချင်း (၁၉၉၂-၁၉၉၉၊ ၂၀၀၂-၂၀၀၆)
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော နိုင်ငံတော်သီချင်းဖြစ်ပြီး ဘုရင်စနစ်ဖြင့် အုပ်စိုးစဉ်ကာလတွင် အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသီချင်းတွင် တေးသွားများသာပါရှိပြီး စာသားများ မပါရှိပေ။
ဘုရင်စနစ်ဖြင့် အုပ်စိုးစဉ်ကာလအတွင်း ဒုတိယမြောက်အသုံးပြုခဲ့သော နိုင်ငံတော်သီချင်းဖြစ်သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန် ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံထူထောင်ပြီးနောက် နောက်ထပ်အသုံးပြုခဲ့သော နိုင်ငံတော်သီချင်းဖြစ်ပြီး ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ် မက်စ်ဝါဒီတော်လှန်မှု(Coup d'état)ပြီးနောက် အမျိုးသားရေးလက္ခဏာများကို ပြောင်းလဲရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော အာဖဂန်နစ္စတန်ပြည်သူဒီမိုကရက်တစ်အစိုးခေါင်းဆောင် နူ မူဟာမတ် တာရာကီ(Ustad Salim Sarmad)ကိုယ်စား ဆူလေမန် လိတ်(Sulaiman Layeq)မှ စာသားများကို ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တေးသွားကို ဂျလီ ဂဟာလန်(Jalīl Ghahlānd)မှ ရေးစပ်ခဲ့ပြီး အူစတက် ဆလင် ဆာမတ်(Ustad Salim Sarmad)မှ စီစဉ်မှုလုပ် တေးကွက်ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သီချင်းအမည်မှာ "Garam shah lā garam shah" (အင်္ဂလိပ်: "Be Ardent, Be More Ardent") ဟူ၍ဖြစ်သည်။ အခြားနိုင်ငံတော်သီချင်းများစွာကဲ့သို့ပင် တခါတရံသီဆိုရာ၌ Chorus နှင့် ပထမဆုံးသော Stanza သာ သီဆိုကြသည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသည် ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို တရားစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးနောက် ထိုသီချင်းကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံတော်သီချင်းအဖြစ်ထားရှိခဲ့ပြီး ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းမရှိတော့ချေ။
နိုင်ငံတော်သီချင်း (၁၉၉၂-၁၉၉၉၊ ၂၀၀၂-၂၀၀၆)ပြင်ဆင်
၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသည် ၁၉၁၉ ခုနှစ်တွင် အုစတက် ကာစင်ရေးသော မူဂျာဟစ်ဒင်တိုက်ပွဲဝင်သီချင်းကို နိုင်ငံတော်သီချင်းအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။ သီချင်းအမည်မှာ "အစ္စလာမ်၏ ခံတပ်၊ အာရှ၏ နှလုံးသား" (ပါရှန်း: قلعه اسلام قلب اسیا‎) ဖြစ်သည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်များနှောင်းပိုင်းကာလများအတွင်း ကုလသမဂ္ဂမှ အသိအမှတ်ပြုထားသော အစိုးရအောက်မှ တာလီဘန်ထိန်းချုပ်ထားသော အာဖဂန်နစ္စတန် အစ္စလာမ်မစ်စော်ဘွားများနိုင်ငံသည် နိုင်ငံဒေသများစွာကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ တာလီဘန်များသည် နိုင်ငံ၏ ဒေသအများစုပါဝင်သည့် ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားသော နယ်မြေများအတွင်း ဂီတကို တရားမဝင်ကြောင်း ကြေညာထားသည်။ ထိုသည်ကြောင့် ၂၀၀၁ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းအထိ တာလီဘန်များ အာဏာပြုတ်ကြသည့်တိုင် အာဖဂန်ဒေသတော်တော်များများတွင် ထိုအချိန်က နိုင်ငံတော်သီချင်းမရှိပဲနေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဤသီချင်းကို ၂၀၀၂ ခုနှစ် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကြားဖြတ်အစိုးရမှ ပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ် အာဖဂန်နစ္စတန် အစ္စလာမ်မစ် သမ္မတနိုင်ငံထူထောင်ချိန်ထိ အသုံးပြုမှုရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်ထိ ဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
↑ The Constitution of Afghanistan။ afghan-web.com။
↑ National Anthem။ afghan-web.com။ 11 April 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Afghanistan (1926-1943) (6 May 2012)။
↑ Afghanistan (1943-1973) (6 May 2012)။
↑ State Funeral for Afghan Leader Slain in '78 Coup (18 March 2009)။
↑ An Afghan Secret Revealed Brings End of an Era (1 February 2009)။
↑ The Journal (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Rabetat al-Alam al-Islami။ 1979။ p. 62။
↑ Visser၊ Derkwillem (1991)။ Flaggen, Wappen, Hymnen: Bevölkerung, Religion, Geographie, Geschichte, Verwaltung, Währung (ဂျာမန်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Battenberg။ p. 258။ ISBN 9783894410445။
↑ Afghanistan (1978-1992) (9 May 2012)။
↑ Afghanistan (1992-1999, 2002-2006)။ NationalAnthems.info (11 May 2012)။
↑ National anthems - Islamic State of Afghanistan (1992-2006) (21 August 2016)။
↑ Fortress of Islam, heart of Asia…။
↑ Afghanistan: "Fortress of Islam, Heart of Asia…"။
↑ Pigott၊ Peter (28 February 2007)။ Canada in Afghanistan: The War So Far။ Dundurn။ p. 17 – via Internet Archive။ Fortress of Islam, Heart of Asia.
↑ Sououd-e-Melli (15 December 2005)။ 15 December 2005 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 July 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။တမ်းပလိတ်:Circular reference
↑ National Anthem Downloads, Lyrics, & Information: NationalAnthems.us - Afghanistan: New recording by the composer။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာဖဂန်_နိုင်ငံတော်သီချင်း&oldid=698246" မှ ရယူရန်